Na -agbagha iwu iwu Torah - IntegritySyndicate.com
Mbido Post Na -agọnarị iwu Torah
Kedu ihe bụ ndị Juu?
Ịba mba Pọl
Matiu 5: 17-18, abịaghị m imebi iwu ahụ, kama imezu ya
Matiu 5:19, Onye ọ bụla na -ezu ike otu n'ime iwu ndị a dịkarịsịrị nta
Matiu 7: 21-23, Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu
Matiu 19:17, Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye na ndụ, debe iwu
Ịdabere na Matiu
Luk 22: 7-20, Jizọs riri Nri Ngabiga
1 John 5: 1-5, Nke a bụ ịhụ Chineke n'anya, ka anyị debe iwu ya
2 Pita 3: 15-17, Pọl-ihe ụfọdụ nke ndị na-amaghị ihe na ndị na-ejighị n'aka na-agbagọ na mbibi nke ha
Ndị Rom 2:13 Ọ bụghị ndị na -anụ iwu, kama ọ bụ ndị na -eme iwu ka a ga -akpọ ndị ezi omume
Aisaia 56 - Ndi ala ọzọ - onye ọ bụla nke na -edebe ụbọchị izu ike
Aịsaịa 66:17, banye n'ubi - na -eri anụ ping na ihe arụ na oke
Zekaraịa 14: 15-19, Ntaramahụhụ a ga-enye mba niile na-arịgoghị ime mmemme ụlọ ntu
“Judaizer” bụ okwu nka nke metụtara otu ndị Juu bụ Ndị Kraịst, ma ndị Juu ma ndị na-abụghị ndị Juu, ndị na-ele iwu ndị Livaị nke Agba Ochie anya ka na-emetụta Ndị Kraịst niile. Ha gbalịrị ịmanye ndị Juu bụ ndị na -eso ụzọ gaa na Iso Ụzọ Kraịst mbụ ibi úgwù ndị Juu, ma Pọl onyeozi, onye jiri ọtụtụ n'ime akwụkwọ ozi ya gbagharịa mmejọ ozizi ha, megidere omume ha nke ukwuu. Okwu a sitere na okwu Koine Greek Ἰουδαΐζειν (Ioudaizein) ejiri otu ugboro na Agba Ọhụrụ Grik (Ndị Galetia 2:14). Ọ bụ ezie na ndị na -ekpe okpukpe ndị Juu n'oge a anaghị akwado ibi úgwù nke anụ ahụ, ha na -akwado idebe Torah n'ọtụtụ iwu ndị ọzọ nke ndị Livaị gụnyere idebe ụbọchị izu ike, iwu nri na ịhụ mmemme na ụbọchị nsọ.
Nkọwa nke ngwaa Judaize, nke aha Judaizer sitere na ya, enwere ike nweta ya naanị site na iji akụkọ ihe mere eme dị iche iche. A ghaghịkwa ịkọwa ihe ọ pụtara na Akwụkwọ Nsọ, akọwaghị ya nke ọma karịa mmekọrịta pụtara ìhè ya na okwu ahụ bụ "onye Juu". Dị ka ihe atụ, Anchor Bible Dictionary na -ekwu, sị: “Ihe pụtara ìhè bụ na a na -amanye ndị mba ọzọ ibi ndụ dị ka omenala ndị Juu si dị.” Okwu Judaizer sitere na Judaize, nke a na -ejighị ya na ntụgharị asụsụ Bekee Bekee (ewezuga bụ Nsụgharị Akwụkwọ Nsọ nke Young maka Ndị Galetia 2:14).
 Ndị nkwado Wikipedia. "Ndị Juu." Wikipedia, akwụkwọ ọkọwa okwu efu. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 Jul. 2021 Weebụ. 26 Ọgọst 2021.
 si Koine Greek Iodaizo (Ιουδαϊζω); leekwa G2450 siri ike
 Akwụkwọ ọkọwa okwu Anchor, Vol. 3. “Ịbụ ndị Juu.”
Ndị Galetia 2: 14-16, Nsụgharị Youngs Literal
14 Ma mb Ie m huru na ha adighi -eje ije nke -ọma n'ezi -okwu nke ozi ọma ahu, m'we si Pita n'iru madu nile, Ọ buru na gi, ebe i bu onye -Ju, n livedi ndu ndi mba ọzọ, ọ bughi dika ndi -Ju si eme. , ka ị na -amanye mba dị iche iche Jisias? 15 anyị sitere na okike ndị Juu, ọ bụghị ndị mmehie nke mba dị iche iche,16 ebe anyị makwara na ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu ka a na -akpọ mmadụ onye ezi omume, ọ bụrụ na ọ bụghị site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị kwa n'ime Kraịst Jizọs kwere, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe nke Kraịst, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu. , ya mere agụrụ gị n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu agaghị abụ anụ ahụ. '
Ndị na -achọ ido anyị n'okpuru iwu Mosis na -achọ ime anyị ohu. (Gal 2: 4) Dị ka ndị na -erite uru n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ, anyị ga -echebe nnwere onwe anyị n'ime Kraịst. (Gal 2: 4-5) Idebe ụbọchị na ọnwa na oge na afọ bụ ịlaghachi ọzọ ịbụ ohu nke iwu adịghị ike na nke dị ala. (Gal 4: 9-10) Kraịst emeela ka anyị nwere onwe anyị inye anyị nnwere onwe; guzosiri ike, unu ekwekwala ọzọ na yoke nke ịbụ ohu. (Gal 5: 1) ntakịrị ihe iko achịcha na -eko achịcha niile. (Gal 5: 9) A kpọrọ anyị ka anyị nwere onwe anyị. (Ndị Galetia 5:13)
Anyị ekwesịghị ịchụso ezi omume site n'iwu (site n'iwu), dị ka Pọl dere, "Ọ bụrụ na m wughachi ihe m kwadara, m na -egosi na m bụ onye mmebi iwu" (Gal 2:18) na, "Ọ bụrụ na ezi omume sitere n'iwu, ekem Christ ama akpa ke ikp purposekpu. (Gal 2:21) Anyị makwaara ọzọ na ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu ka a na -akpọ mmadụ n'onye ezi omume kama site na okwukwe na Jizọs Kraịst. (Ndị Galetia 2:16) Pọl na-ebo ndị Juu ebubo na ha na-agbagọ ozi ọma Kraịst (Gal 1: 6-7) Anyị anaghị enweta mmụọ site n'ọrụ nke iwu kama ọ bụ site n'iji okwukwe nụrụ (Gal 3: 2) Mmụọ Nsọ nyere anyị ma na -arụ ọrụ ebube n'etiti anyị na -eme ya site na ịnụrụ okwukwe, ọ bụghị ọrụ nke iwu. (Gal 3: 5-6) Anyị ekwesịghị ịlaghachi n'ụzọ ochie nke anụ ahụ zuru oke mgbe anyị bidoro n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ. (Gal 3: 3) Ma ọ bụghị ya, ikwusa Oziọma bụ ihe efu. (Ndị Galeshia 3: 4)
Ndị dabere n'ọrụ nile nke iwu nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye anābu ọnu ka ọ bu, bú onye nādighi -erube isi n'ihe nile edeworo n'akwukwọ iwu, me ha. (Ndị Galetia 3:10) Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ nye anyị -n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụwara n'elu osisi bụ" - ka ngọzi Abraham wee bata n'ime Kraịst Jizọs. zigara ndị mba ọzọ, ka anyị were okwukwe nata mmụọ nke e kwere na nkwa. (Gal 3: 13-14) Iwu bụ onye nche anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe. (Gal 3:24) Ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta, n'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, anyị bụ ụmụ Chineke, site n'okwukwe. (Ndị Galeshia 3: 25-26)
Ndị e mere baptizim baa na Kraịst eyikwasịwo Kraịst. (Ndị Galetia 3:27) Ndị ahụ ga -abụ ndị ezi omume site n'iwu kewapụrụ onwe ha na Kraịst - ha esila n'amara dapụ. (Gal 5: 4) Ọ bụ site na Mmụọ, site n'okwukwe, anyị nwere olile anya nke ezi omume. (Gal 5: 5) Ihe dị mkpa maka ihe ọ bụla bụ Kraịst Jizọs bụ okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya. (Gal 5: 6) N'ihi na emezuru iwu ahụ niile n'otu okwu: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị." (Ndị Galetia 5:14) Na -eburunụ ibu arọ ibe unu, wee mezuo iwu nke Kraịst. (Ndị Galetia 6: 2)
N'ime Kraịst Jizọs anyị bụ otu - enweghị ọdịiche dị n'etiti onye Juu ma ọ bụ onye Grik, nwoke ma ọ bụ nwanyị. (Gal 3:28) Ọ bụrụkwa na anyị bụ nke Kraịst, yabụ na anyị bụ ụmụ Abraham, ndị nketa dịka nkwa si dị. (Gal 3:29) A gbapụtala anyị n'iwu. (Gal 4: 4-5) Onye na-agha mkpụrụ maka mmụọ ga-esite na mmụọ wee nweta ndụ ebighị ebi. (Gal 6: 8) Idebe ma ọ bụ enweghị idebe ibi úgwù (nraranye nye Iwu Mosis) dị mkpa maka ihe ọ bụla, mana ọ bụ naanị ịbụ ihe e kere ọhụrụ. (Ndị Galetia 6:15)
Na Matiu 5: 17-18 Jizọs kwuru, "abịaghị m imebi iwu ahụ, kama imezu ya." Gịnị ka 'imezu iwu' pụtara? “Imezu iwu” ọ̀ pụtara nanị ime ya dị ka Mozis chọrọ? Agbanyeghị, ọ bụ mmejọ dị mkpa iche n'echiche na Jizọs mere ka mkpa ọ dị idobe iwu niile enyere Israel site n'aka Moses.
Ọ bụrụ na Jizọs chọrọ ka anyị mee ihe enyere n'iwu dịka Moses nyere ya, mgbe ahụ ibi úgwù n'anụ ahụ ka dị mkpa maka mmadụ niile. Anyi kwesiri icheta na ibi ugwu n'anụ ahụ bụ akara ọgbụgba ndụ ya na Abraham gbara (mgbe ọ kwenyere Oziọma ahụ, Gal 3: 8; lee Rom 4: 9-12) na akara nke ezi onye Israel na-erube isi. Iwu kwuru nke ọma: “Gwa ụmụ Izrel okwu, sị, 'Mgbe nwanyị mụrụ nwa wee mụọ nwa nwoke, ọ ga -abụ onye na -adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa ... '"(Levitikọs 12: 2-3) Rịbakwa ama n'iwu nke mere ka “onye ọ bụla a na -ebighị úgwù rie [Ememe Ngabiga]. Otu iwu ahụ ga-adịrị nwa afọ dịka onye mbịarambịa nke bi dị ka ọbịa "(Ọpụ 12: 48-49) N'Ọpụpụ 4: 24-26 Chineke yiri Mozis egwu ọnwụ ma ọ bụrụ na ọ hụghị na e biiri ụmụ ya úgwù. Nke a bụ otu n'ime iwu kachasị mkpa Chineke nyere Israel. Ma ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị na -eche na ọ bụ ọrụ dịịrị ya ime iwu a nke Chineke, n'agbanyeghị na anyị enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla na nkuzi Jizọs edekọrọ nke ga -ewepụ ihe iwu chọrọ ibi ugwu.
Ibi úgwù dị “n'obi ugbu a,” n'ihi na “ọ bụ onye Juu n'ime obi; ibi úgwù bụkwa nke sitere n'obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi ”(Ndị Rom 2: 28-29). N'ezie enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ibi úgwù n'anụ ahụ na ibi úgwù n'ime mmụọ. Mana Agba Ọhụrụ na -ahụ ibi úgwù ime mmụọ, n'ime dị ka nzaghachi kwesịrị ekwesị nye iwu ahụ nke anyị ga -ebi. Emebela iwu ahụ n'ike mmụọ wee si otu a 'mezuo'. E bibighị ya. N'ezie ọ werela ụdị dị iche n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ.
Jizọs malitere ụdị mmụọ nke iwu iri na iwu ndị ọzọ mgbe ọ na -ekwupụta n'Ozizi Elu Ugwu ya, "Ị nụla na a gwara ndị mgbe ochie, 'Egbula ọchụ' ... mana a sị m gị…" ( Mt 5: 21-22). “Ị nụrụ na a sịrị, 'Akwala iko,' mana a sị m gị…" (Mat. 5: 27-28). “Mozis kwere ka ị gbaa ndị nwunye gị alụkwaghịm, mana site na mmalite ọ bụghị otu a. Ana m asị gị… ”(Mt 19: 8-9).
Site na 'imezu' iwu Jizọs na -agbanwe ya - na -agbanwe ya n'ezie - mana ọ naghị ebibi ya. N'eziokwu ọ na -ewepụta ebumnobi nke iwu ahụ n'ezie, na -eme ka ọ bụrụ ihe siri ike, n'ọnọdụ ụfọdụ (ịgba alụkwaghịm) na -akagbu iwu Moses na Deuterọnọmi 24, na -ekwupụta na ndokwa a bụ nwa oge. Nke a bụ eziokwu dị mkpa: nkuzi Jizọs mere ka iwu ịgba alụkwaghịm Mozis bụrụ ihe efu. Ọ na -akpọghachite anyị n'iwu alụmdi na nwunye mbụ nke Chineke nyere na Jenesis 2:24. Jizọs si otú a rịọ maka akụkụ mbụ na nke dị mkpa nke Tora. Ọ na -akagbu nzere nke Moses nyere dị ka Torah.
Jisos wetara iwu a na njedebe nke ebumnobi ya nke emere ya na mbu (Rom 10: 4). Dịka ọmụmaatụ, gịnị gbasara iwu anụ dị ọcha na adịghị ọcha? Ndi Jesus etịn̄ n̄kpọ ndomokiet aban̄a se ibet oro ọwọrọde ọnọ mme Christian? Jisos gara n'obi nsogbu nke adịghị ọcha: “Ihe ọ bụla nke si n'ime mmadụ bata n'ime mmadụ, agaghị emerụ ya, n'ihi na ọ banyeghị n'obi ya, kama ọ na-abanye n'afọ ya, ewee wepụ ya" (Mak 7: 18-19). Mgbe ahụ Mak na -ekwu, "Otu a ka Jisọs siri kwuo na ihe oriri niile dị ọcha" (Mak 7:19). Iwu nke nri dị ọcha na nke na -adịghị ọcha adịkwaghị arụ ọrụ. Jizọs nọ na -ekwu maka mgbanwe a n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ.
Matiu 5: 17-18 (ESV), Iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m imebi ha, kama imezu ya
17 “Unu echela na m bịara ịkagbu Iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m imebi ha, kama imezu ya. 18 N'ezie asim unu, rue mb heavene elu -igwe na ala gāgabiga, ọ dighi otù ihe ntà, ọbuná otù ntabi -anya, gāgabiga n'iwu. ruo mgbe emechara ihe niile.
Matiu 5: 17-19 na-abụkarị ndị na-akwado ịgbaso iwu Moses. Nke a gụnyere Matiu 5:19 nke na -asị, "Ya mere, onye ọ bụla nke na -ezu ike n'ime otu n'ime iwu ndị a kacha nta ma kuziere ndị ọzọ ime otu ihe ahụ, a ga -akpọ ya onye dịkarịsịrị alaeze nke eluigwe." Ha ekwetaghị na nke a bụ mmalite okwuchukwu Jizọs n'elu ugwu nakwa na iwu ndị ọ na -ekwu bụ nke si n'ọnụ ya pụta. Matiu 5: 19-20 na-eje ozi dị ka mmalite nke nkuzi Jizọs banyere ezi omume nke akọwapụtara nke ọma na isi nke 5-7. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kwusiri ike nrube isi n'iwu nke Iwu, mana iwu ndị Jizọs kwusiri okwu ike bụ inwe inwe obi dị ọcha na omume ezi omume nke na -ekpuchi isiokwu dịka iwe, agụụ ihe ọjọọ, ịgba alụkwaghịm, ịsụ iyi, ịbọ ọ́bọ̀, ndị iro na -ahụ n'anya, inye ndị nọ na mkpa aka, ikpe ekpere , mgbaghara, ibu ọnụ, nchekasị, ikpe ndị ọzọ ikpe, iwu ọlaedo, na ịmị mkpụrụ.
O doro anya site na ihe a na -ekwu na Jizọs na -agba ìgwè mmadụ ahụ ume ka ha ghara imebi nkuzi ya mgbe ọ na -ekwu, “onye ọ bụla nke mere ka otu n'ime ihe ndị a pere mpe n'ime iwu ndị a wee kuziere ndị ọzọ ime otu ihe ahụ, a ga -akpọ ya onye dịkarịsịrị alaeze eluigwe, mana onye ọ bụla na -eme ha ma na -ezi ha, a ga -akpọ ya onye ukwu n'alaeze eluigwe. ” (Mt 5:19) Ọ naghị ekwu maka emume Moses debere nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii na -arụrịta ụka oge niile. Kama nke ahụ, Jizọs kwuru, "ọ gwụla ma ezi omume gị karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ị gaghị aba n'alaeze eluigwe." (Mat. 5:20) Ezi omume nke ọ na -ekwu maka ya bụ nke iwu ya chịkọtara n'ime nkuzi ya nyere ihe karịrị isi atọ.
Mgbe Jizọs na -ekwu maka Iwu ma ọ bụ Ndị Amụma, ọ bụ n'ihe metụtara imezu ha. Ọ bụ ya ga -emezu ihe niile e dere banyere ya. Site na mmezu a, o hibela ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ọbara ya. Ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu, ebe anyị nwụrụ nye nke dọtara anyị n'agha, ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị ụzọ ochie nke koodu edere ede. (Ndị Rom 7: 6)
Matiu 5: 17-20 Ewezuga ezi omume gị karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii
17 "Unu echela na m bịara ịkagbu Iwu ahụ ma ọ bụ ihe ndị amụma kụziri; Abịaghị m imebi ha, kama imezu ya. 18 N'ezie asim unu, rue mb heavene elu -igwe na ala gāgabiga, ọ dighi otù ihe ntà, ọbuná otù ntabi -anya, gāgabiga n'iwu. ruo mgbe emechara ihe niile. 19 Yabụ onye ọ bụla na -ezu ike otu n'ime ndị kacha nta ndị a nyere n'iwu ma kuziere ndị ọzọ ime otu ihe ahụ, a ga -akpọ ya onye dịkarịrị alaeze eluigwe, mana onye ọ bụla na -eme ha ma kuziere ha, a ga -akpọ ya onye ukwu n'alaeze eluigwe. 20 N'ihi na asim unu, ma ezi omume gị karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ị gaghị aba na alaeze eluigwe.
21 Ị nụla na a gwara ndị oge ochie… mana asị m gị…
Banyere igbu ọchụ na iwe: Matiu 5: 21-26
Banyere ịkwa iko na agụụ mmekọahụ: Matiu 5: 27-30
Banyere ịgba alụkwaghịm: Matiu 5: 31-32
Banyere Ịweụ iyi na ị oathụ iyi: Matiu 5: 33-37
Banyere mmegwara: Matiu 5: 38-42
Banyere Ndị Iro Ịhụnanya: Matiu 5: 43-48
Banyere inye ndị ogbenye ihe: Matiu 6: 1-4
Banyere Ikpe ekpere: Matiu 6: 5-13
Banyere Mgbaghara: Matiu 6:14
Banyere Ibu Ọnụ: Matiu 6: 16-18
Banyere Nchegbu: Matiu 6: 25-34
Banyere Ikpe Ndị Ọzọ ikpe: Matiu 7: 1-5
Banyere Ụkpụrụ Ọma ahụ: Matiu 7: 12-14
Banyere ịmị mkpụrụ: Matiu 7: 15-20
Ndị Rom 7: 6 (ESV), anyị na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị n'ụzọ ochie nke koodu ederede.
6 Ma ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu, ebe anyị nwụrụ nye ihe dọọrọ anyị n'agha, ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị n'ụzọ ochie nke koodu ederede..
Matiu 7: 21-23, Dsi n'ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu
Ọtụtụ mgbe, a na -ewepụ okwu Jizọs na -ekwu na Matiu 7:23 ebe Jizọs na -agwa ndị na -amaghị Kraịst, na ọ ga -agwa ha, 'Amaghị m gị; si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu. ' Ha na -akọwa na iwu adịghị akwado iwu nke ha ghọtara iwu ọgbụgba ndụ ochie nke Mosis. Ajụjụ dị n'ime ihe gbasara ozi Jizọs, gịnị bụ nghọta ya banyere mmebi iwu? N'ezie ọ bụghị dị ka ndị Juu na-eme ka ọ pụta ìhè Site na Matiu 23: 27-28 ebe Jizọs kpọrọ ndị odeakwụkwọ (ndị ọka iwu) na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, na-asị, “Unu dị ka ili e tere ncha, nke na-apụta n'ile mara mma, mana n'ime jupụtara ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ na adịghị ọcha niile. Ya mere unu onwe unu na -ahụkwa onwe unu dị ka ndị ezi omume, ma n'ime unu jupụtara na ihu abụọ na mmebi iwu.
Site n'okwu nke Jizọs anyị na -aghọta ihe ọ na -ewere mmebi iwu ịbụ. Nye ya, ọ bụ ọnọdụ ime dị mkpa, na ngosipụta nke ezi omume enweghị ihe ọ bụ. Nye Kraịst, “mmebi iwu” bụ ọnọdụ nke ihe dị n'ime mmadụ, ọ bụghị aha ụwa ha nke irube isi n'iwu na iwu. Ịgbaso Torah anaghị egbochi mmadụ imebi iwu ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ezi omume. Ọzọkwa, Jizọs kpọrọ ndị lekwasịrị anya n'esepụghị aka n'akwụkwọ edere dị ka ndị jupụtara na ihu abụọ na mmebi iwu.
Enwere ọtụtụ ihe akaebe ndị ọzọ sitere n'akwụkwọ ndị ozi nke na -akwado nghọta a nke ihe okwu a bụ "mmebi iwu" pụtara dịka Kraist na ndị Apostoles jiri mee ya. Na Luk 13:27, Jizọs kwuru maka ndị na -agha ụgha, "Si n'ebe m nọ pụọ, unu niile ọrụ ọjọọ." Okwu ebe a bụ okwu Grik adikia (ἀδικία) nke akwụkwọ ọkọwa okwu BDAG kọwara dị ka (1) omume megidere ụkpụrụ omume ziri ezi, ime ihe ọjọọ, (2) ogo nke ikpe na -ezighị ezi, ajọ omume, ajọ omume, ikpe na -ezighị ezi. N'iburu n'uche na okwu ahụ yiri Matiu 7:23, anyị nwere ike ịghọta na ihe Jizọs na -ekwu site na mmebi iwu bụ ajọ omume ma ọ bụ ajọ omume, nakwa na o jighị okwu ahụ kọwaa onye na -adabaghị n'iwu Mozis.
Okwu a bụ 'mmebi iwu' dịka achọtara n'ime Agba Ọhụrụ gbasara ajọ ihe ma ọ bụ mmehie. Ebe anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie, anyị abụrụla ndị ohu nke ezi omume (Ndị Rom 6:18) Pọl ghọtara ọdịiche dị n'etiti ezi omume na mmebi iwu n'otu ụzọ ahụ o kwuru, “dị nnọọ ka unu gosiburu akụkụ ahụ unu dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na mmebi iwu na -eduga. Ya mere, ugbu a, nyepụnụ akụkụ ahụ unu ka ha bụrụ ohu nke ezi omume nke na -eduga n'ịdị nsọ. (Ndị Rom 6:19) Ọ tụlere ezi omume na mmebi iwu, ìhè na ọchịchịrị. (2 Ndị Kọrịnt 6:14) Amara Chineke apụtala, na-akụziri anyị ịjụ asọpụrụghị Chineke na agụụ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, ​​izi ezi, na nsọpụrụ Chineke n'oge a, (Tit 2: 11-12) Jizọs nyere ya onwe ya maka anyị ịgbapụta anyị n'ajọ omume niile na idobere onwe ya otu ndị. (Taị 2:14) Njikọ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke ọgbụgba ndụ bụ mmehie, ọ bụghị irube isi n'iwu Mozis. Nke a kwadoro na 1 Jọn 3: 4 nke na -asị, “Onye ọ bụla nke na -eme mmehie na -emekwa mmebi iwu; mmehie bụ mmebi iwu. ” Ya mere, echiche Agba Ọhụrụ nke mmebi iwu metụtara ịbụ onye na -ejere mmehie na ọchịchịrị aka kama ịgbaso ìhè na irube isi na mmụọ nsọ. Anyị ga -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị ụzọ ochie nke koodu edere ede. (Ndị Rom 7: 6)
Matiu 7: 21-23 si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu
21 “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na -asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga -aba n'alaeze eluigwe, kama onye n doesme ihe Nnam Nke bi n'elu -igwe nāchọ. 22 N'ụbọchị ahụ ọtụtụ mmadụ ga -asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ọ bụ na anyị ebughị amụma n'aha gị, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ n'aha gị, rụọkwa ọtụtụ ọrụ dị ike n'aha gị?' 23 Mgbe ahụ ka m ga -agwa ha, 'Amaghị m gị; si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu. '
Matiu 23: 27-28 (ESV), a na-ahụ ndị ọzọ ka ha bụ ndị ezi omume, mana n'ime gị juputara na ihu abụọ na mmebi iwu.
27 Ahụhụ ga -adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! N'ihi na unu dị ka ili e tere nzụ, nke pụtara n'ile anya mara mma, mana n'ime ya jupụtara ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ na adịghị ọcha niile. 28 So ị na -egosikwa na ị bụ onye ezi omume nye ndị ọzọ, mana n'ime gị juputara na ihu abụọ na mmebi iwu.
Luk 13: 26-27 (ESV), si n'ebe m nọ pụọ, unu niile ndị ọrụ ihe ọjọọ
26 Mgbe ahụ, ị ​​ga-amalite ịsị, 'Anyị riri ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'ihu gị, ị kụziri n'okporo ámá anyị.' 27 Ma ọ ga -asị, 'Ana m asị unu, amaghị m ebe unu si bịa. Sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu niile ndị ọrụ ihe ọjọọ.'
Ndị Rom 6: 15-19 I nwere otu mgbe ị gosipụtara ndị otu gị ka ha bụrụ ndị ohu nke adịghị ọcha, mmebi iwu na -eduga n'ịbawanye mmebi iwu
15 Gịnịzi? Anyị ga -eme mmehie n'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara? Ọ dịghị ma ọlị! 16 Ọ bụ na unu amaghị na ọ bụrụ na unu na -enyefe onwe unu onye ọ bụla dị ka ndị ohu na -erube isi, unu bụ ohu onye ahụ ị na -erubere isi, ma ọ bụ nke mmehie, nke na -eduba n'ọnwụ, ma ọ bụ nrubeisi, nke na -eduga n'ezi omume? 17 Ma ekele dịrị Chineke, na unu bụbu ndị ohu mmehie jiri obi unu na -erube isi n'ozizi nke e nyefere unu n'aka, 18 na, ebe a tọhapụrụ gị na mmehie, bụrụ ndị ohu nke ezi omume. 19 Ana m ekwu dị ka mmadụ si dị, n'ihi oke adịghị ike gị. Maka dị nnọọ ka i chetara akụkụ ahụ gị otu mgbe dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na mmebi iwu nke na -ebute mmebi iwu karịa, ugbu a, nyefee akụkụ ahụ gị ka ha bụrụ ndị ohu nke ezi omume na -eduga n'ịdị nsọ..
(2 Ndị Kọrịnt 6:14), Ezi omume ya na mmebi iwu? Ma ọ bụ olee mkpakọrịta nwere ìhè na ọchịchịrị
14 Unu na ndi nverskweghi ekwe ekekọtala onwe -unu. N'ihi na olee ihe jikọrọ ezi omume na mmebi iwu? Ma ọ bụ, olee ihe jikọrọ ìhè na ọchịchịrị?
Taịtọs 2: 11-14 (NIV) onye nyere onwe ya maka anyị ịgbapụta anyị site n'ajọ omume nile, na ime onwe -ya otù ndi
11 N'ihi na amara Chineke apụtala, na -eweta nzọpụta nye mmadụ niile, 12 na -azụ anyị ka anyị hapụ asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, ​​izi ezi na nsọpụrụ Chineke n'oge a., 13 na -echere olile anya anyị a gọziri agọzi, mpụta nke ebube nke Chineke anyị dị ukwuu na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, 14 onye nyere onwe ya maka anyị ịgbapụta anyị site n'ajọ omume nile, na ime onwe -ya otù ndi maka ihe nke aka ya bụ ndị na -anụ ọkụ n'obi maka ezi ọrụ.
1 Jọn 3: 4, Onye ọ bụla nke na -eme mmehie na -emekwa mmebi iwu; mmehie bụ mmebi iwu
4 Onye ọ bụla nke na -eme mmehie na -emekwa mmebi iwu; mmehie bụ mmebi iwu.
Mgbe otu nwoke bara ọgaranya jụrụ Jizọs na Matiu 19: 16-21, "Kedu ihe ọma m ga-eme ka m wee nweta ndụ ebighi ebi," Jizọs kwuru, "Ọ bụrụ na ị ga-aba na ndụ, debe iwu." Ma mgbe a jụrụ ya ajụjụ banyere ndị ahụ, Jizọs ekwughị ha niile ma ọ bụ iwu niile nke Mozis. Naanị ihe o kwuru bụ iwu isii. Ise n'ime ha sitere n'iwu iri gụnyere, 'Egbula ọchụ, Akwala iko, Ezula ohi, Agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne ya, ọ gbakwụnyere,' Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Kama ịrịọ maka iwu ahụ dum, ọ rịọrọ ndị otu a họpụtara n'iwu nke kwekọrọ n'ozizi ezi omume ya.
Nwoke ahụ sịrị, "Ihe ndị a niile ka m debere, gịnị ka fọdụụrụ m?" Jizọs gara n'ihu kwuo na Matiu 19:21, “Ọ bụrụ na ị ga -ezu oke, gaa ree ihe ị nwere nye ndị ogbenye, ị ga -enwekwa akụ n'eluigwe; bia, soro m. ” N'ebe a, anyị na -ahụ ụkpụrụ Jizọs abụghị Iwu Mozis niile kama ọ bụ ndị isi iwu Chineke gbasara ịhụ mmadụ n'anya na ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye. Ọ bụrụ na Jizọs kwenyere na iwu 613 nke iwu Mosis dị oke mkpa, nke a gaara abụ ohere zuru oke ikwu ya. Kama nke ahụ, akwụkwọ ndenye Jizọs iji lekwasị anya n'ụkpụrụ ịdị mma nke metụtara ịhụnanya na ọrụ ebere. Kama imezu iwu Mozis, ụkpụrụ nke izu oke ya bụ ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye naanị dị ka ohu.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ekpuchila okwu na Matiu na ndị na -ekpe okpukpe ndị Juu na -agbagọ na -amasị ha ma o doro anya na ha dabere na Matiu. N'ime okwu Jizọs nke ha na -arụtụ aka na ya na Matiu, ọ nweghị myirịta ọ bụla n'ime Oziọma ndị ọzọ ma ọ bụ akụkụ nke Agba Ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịgbaso Iwu Mozis bụ ihe dị mkpa n'ozizi Jizọs, okwu ndị a nke ndị na -ekpe okpukpe ndị Juu ji eme ihe n'ụzọ na -adịghị mma iji kwado idebe Torah kwesịrị ka edozigharị ya ebe ọzọ n'akwụkwọ ndịozi. Ekwesịrị igosi ya nke ọma na Luk-Ọrụ Ndị Ozi nke edere na Matiu wee na-achọ ịtọ ndekọ ahụ n'ụzọ ziri ezi n'ihe Jizọs mere na kụziere site n'otu onye ahụ dekwara ihe ndịozi mere na nkuzi. Maka inwetakwu ihe nzere nke Luke-Ọrụ ma e jiri ya tụnyere Matiu lee https://ntcanon.com
Ụfọdụ na -arụtụ aka na nri anyasị ikpeazụ nke Jizọs na ndị na -eso ụzọ ya bụ nri ngabiga bụ ihe na -egosi na anyị kwesịrị ime oriri Ngabiga (dị ka oriri kwa afọ). Tupu anyị wulie elu na nkwubi okwu, anyị kwesịrị iburu n'uche na na Luk 22, ihe e mesiri ike bụ nri (oriri) dịka Jizọs chọrọ iri na nnukwu ụlọ e doziri edozi (ọmarịcha ọnọdụ) dị ka nri ikpeazụ ya na ndị na -eso ụzọ ya. Ihe gbara amaokwu a, abụghị ịbụ ihe a na -eme kwa ụbọchị kama ọ bụ oge pụrụ iche nke Jizọs agaghị eri oriri ruo mgbe ala eze Chineke mezuchara. (Luk 22:17) Mgbe ọ sịrị, “Agaghị m a drinkụ mkpụrụ nke osisi vaịn ruo mgbe alaeze Chineke ga -abịa” n'ụzọ doro anya ọ na -ekwu maka oriri. (Luk 22:18) Jizọs weere nri ahụ pụrụ iche n'ihi na ọ bụ oriri ikpeazụ ya na ndị na -eso ụzọ ya tupu e guzobe alaeze Chineke. Jizọs sịrị, “Ọ gụsiri m agụụ ike iso unu rie nri ememme ngabiga a tupu mụ ataa ahụhụ.” (Luk 22:15) Ihe e mesiri ike n'ebe a bụ iso ndị nọ ya nso rie nri ikpeazụ.
Jizọs gara n'ihu mee oriri niile gbasara ọgbụgba ndụ ọhụrụ (ọ bụghị nke ochie) mgbe ọ na -ekwu maka achịcha ahụ, “Nke a bụ ahụ m, nke enyere maka gị,” na banyere mmanya, “iko a wụpụụrụ gị bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n’ime ọbara m. ” (Luke 2: 19-20) Ke akpanikọ obufa ediomi oro iyịp Jesus ọsọn̄ọde ada owụt se Passover editi Israel oro ẹkesiode ke isọn̄ Egypt owụtde. Kama ịsị ka anyị rie achịcha ahụ iji cheta Izrel, ọ sịrị, "Mee nke a iji na -echeta m." (Luk 22:19) Mgbe ọ bụla anyị na-ewere ahụ na ọbara Kraịst anyị na-ekwusa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa (1Cor 11: 23-26) Kraịst bụ aja anyị. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 5: 7.) Achịcha na -ekoghị eko bụ eziokwu na eziokwu (1 Ndị Kọrịnt 5: 8)
Na 1 Ndị Kọrịnt 5: 7-8 Pọl tinyere otu ụkpụrụ 'ime mmụọ' maka Ememe Ngabiga kwa afọ na ụbọchị achịcha na-ekoghị eko dịka ọ na-eme n'ụbọchị izu ike. "A chụwo Kraịst Ngabiga anyị n'àjà." Ememe Ngabiga anyị nke Ndị Kraịst abụghịzi nwa atụrụ a na -egbu kwa afọ kama ọ bụ Onye nzọpụta egbugburu otu ugboro, n'ike ịnapụta anyị kwa ụbọchị, ọ bụghị otu ugboro n'afọ. "Ya mere, ka anyị mee ememme, ọ bụghị na ihe iko achịcha ochie, ma ọ bụ ihe iko achịcha nke ajọ omume na ajọ omume, kama jiri achịcha na -ekoghị eko nke ezi obi na eziokwu" (1 Cor 5: 8). N'ihi nke a, anyị agaghị eri achịcha ma ọ bụ ị theụ iko nke Onyenwe anyị n'ụzọ na -erughị eru kama ka anyị buru ụzọ nyochaa onwe anyị. (1 Ndị Kọrịnt 11: 27-29) Ihe a ga-ewepụ n'etiti anyị bụ ịkwa iko, anyaukwu, wayo, ikpere arụsị, ị dụbiga mmanya ókè 'na omume mkparị. (1 Ndị Kọrịnt 5: 9-11) Nke a bụ ihe ọjọọ a ga-asachapụ-ọ bụghị ịghara ime koodu ochie edere. (1 Ndị Kọrịnt 5: 9-13) Ndị a bụ ezigbo nsogbu ime mmụọ, ọ bụghị okwu nhicha ihe na-eko achịcha n'ụgbọ ala anyị na n'ụlọ anyị maka otu izu n'afọ. Pọl kwuru na Ndị Kraịst kwesịrị 'ime ememe' na -adịgide adịgide. Ejila iwu nnwere onwe n'ime mmụọ dochie usoro iwu Mosis dị ka usoro iwu, chịkọtara n'otu iwu ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị (Gal 5:14).
Luk 22: 7-13 (Gaa) kwadebere anyị ngabiga ka anyị rie ya.
7 Mgbe ahụ wee ụbọchị achịcha na -ekoghị eko, nke a ga -achụ nwa atụrụ ngabiga n'àjà. 8 Ya mere, Jizọs zipụrụ Pita na Jọn, sị,Je kwadebere anyị oriri ngabiga ka anyị rie ya. " 9 Ha sịrị ya, “Olee ebe ị ga -achọ ka anyị kwadebe ya?” 10 Ọ sịrị ha, “Lee, mgbe unu banyere nʼime obodo, otu nwoke bu ite mmiri ga -ezute unu. Ẹtiene enye ẹdụk ufọk emi enye edidụkde 11 gwa -kwa -ra onye -nwe ulo, Onye -ozizí si gi, Wherele ebe ulo -ọbìa di, ebe mu na ndi n disciplesso uzọm g eatri oriri ngabiga? ' 12 Ọ ga -egosikwa unu nnukwu ọnụ ụlọ nke e doziri edozi; kwadebe ya ebe ahụ. ” 13 Ha we je hu ya dika Ọ gwara ha, ha we dozie ememe ngabiga.
Luke 22: 14-20 (ESV), Agaghị m a drinkụ mkpụrụ nke osisi vaịn ruo mgbe alaeze Chineke bịara
14 Ma mgbe oge awa ruru, ọ nọdụrụ ala na tebụl, ya na ndịozi ya. 15 O wee sị ha, "Ọ na -agụsi m agụụ ike iso unu rie oriri ngabiga a tupu mụ ataa ahụhụ. 16 N'ihi na asim unu, M'gaghi -eri ya rue mb ite ag fulfilledmezu ya n'ala -eze Chineke. " 17 O werekwa iko, mgbe o kelesịrị ekele, ọ sịrị, “Were nke a kee ya n'etiti onwe unu. 18 N'ihi na asim unu na site n'ub onu a Agaghị m a ofụ mkpụrụ nke osisi vaịn ruo mgbe alaeze Chineke bịara. " 19 O we nara ob breade achicha, kele kwa, ọ nyawara ya, nye ha, si, Nka bu arum nke enyereri unu.. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. ” 20 Ọzọ kwa, iko ahu, mb theye ha risiri, si, Iko a nāwusara unu bu ọb covenantub newa -ndu ọhu nime ọbaram.
1 Jọn 5: 1-5, Nke a bụ ịhụnanya Chineke, ka anyị debe iwu ya
A na-ewerekarị 1 Jọn 5: 1-5 na-enweghị isi. Ụfọdụ na -ejikọ iwu Chineke na -akpaghị aka na iwu Mosis (Torah) wee si otú a na -ekwu na Jọn na -agwa anyị ka anyị soro iwu Mosis. Agbanyeghị, nke a bụ ntụgharị nke okwu na ebumnuche Jọn nke pụtara ìhè site na ilele onodu 1John. N'ile 1John, iwu ndị a na -ekwu gbasara ọgbụgba ndụ ọhụrụ ọ bụghị nke ochie. A chịkọtara ihe Chineke nyere n'iwu na 1 Jọn 3:23 dị ka ikwere n'aha Jizọs Kraịst na ịhụrịta ibe ha n'anya. Inyocha akwụkwọ 1 Jọn, iwu Chineke dị ka Jọn si kwuo bụ (1) ikwere na onye Jizọs bụ, (2) ịhapụ mmehie na ihe ọjọọ, (3) rube isi n'ozizi Jizọs, (4) bụrụ ndị mmụọ na -edu na (5) ịhụrịta ibe unu n'anya. Ndị a bụ iwu Chineke n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Jọn chịkọtara:
Iwu Chineke dịka 1 Jọn siri kwuo
Kwere na onye Jizọs bụ (Kraịst, Ọkpara Chineke): 1John 1:1-3, 1John 2:1-2, 1John 2:22-25, 1 Jọn 4: 2-3, 1 Jọn 4:10, 1 Jọn 4: 14-16, 1 Jọn 5: 1, 1 Jọn 5: 4-15, 1 Jọn 5:20
Zere mmehie na ajọ ihe (ọchịchịrị): 1John 1:5-10, 1John 2:15-17, 1John 3:2-10, 1John 5:16-19
Na -erube isi n'ozizi Jizọs (jee ije ka ọ jere): 1John 2:3-6, 1John 3:21-24
Ka Mmụọ Nsọ na -edu gị (nọgidesie ike na mmanụ Chineke): 1John 2:20-21, 1John 2:27-29, 1 Jọn 4:13
Hụ ibe gị n'anya (hụ nwanne gị n'anya): 1John 2:7-11, 1John 3:10-18, 1John 4:7-12, 1John 4:16-21
1 Jọn 5: 1-5. Nke a bụ ịhụnanya Chineke, ka anyị debe iwu ya
1 Onye ọ bụla nke kwere na Jizọs bụ Kraịst bụ onye Chineke mụrụ, onye ọ bụla nke hụrụ Nna ya n'anya na -ahụkwa onye ọ bụla mụrụ ya n'anya. 2 Site na nke a anyị maara na anyị hụrụ ụmụ Chineke n'anya, mgbe anyị hụrụ Chineke n'anya ma na -erube isi n'iwu ya. 3 N'ihi na nka bu ihu -n'anya Chineke, ka ayi debe ihe nile O nyere n'iwu. Ihe o nyere n'iwu adịghịkwa arọ. 4 N'ihi na onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke na -emeri ụwa. Ma nke a bụ mmeri nke meriri ụwa - okwukwe anyị. 5 Nye bụ onye ahụ na -emeri ụwa ma e wezụga onye kwere na Jizọs bụ Ọkpara Chineke?
1 Jọn 3: 21-24. Nke a bụ ihe o nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya Jizọs Kraịst wee hụ ibe anyị n'anya
21 Ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na obi anyị adịghị ama anyị ikpe, anyị nwere obi ike n'ihu Chineke; 22 na ihe ọ bụla anyị rịọrọ ka anyị na -enweta n'aka ya, n'ihi na anyị na -edebe iwu ya ma na -eme ihe na -atọ ya ụtọ. 23 Ma nke a bụ ihe o nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya Jizọs Kraịst wee hụrịta ibe anyị n'anya, dịka o nyere anyị n'iwu.. 24 Onye ọ bụla nke na -edebe ihe o nyere n'iwu na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. Ọ bu kwa nka ka ayi ji mara na Ọ nānọgide nime ayi, site na Mọ Nsọ nke O nyeworo ayi.
1 Jọn 4: 20-21. Iwu a ka anyị nwere n'aka ya: onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya ga -ahụkwa nwanne ya n'anya
20 Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, "Ahụrụ m Chineke n'anya" ma kpọọ nwanne ya asị, ọ bụ onye ụgha; koro owo eke m lovemaha eyenete esie emi enye okokụtde ikemeke ndima Abasi emi enye m notkwe. 21 Iwu a ka anyị nwere n'aka ya: onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya ga -ahụkwa nwanne ya n'anya.
2 Pita 3: 15-17, Paul - ụfọdụ ihe nke ndị na -amaghị ihe na -ejighị n'aka na -agbagọ na mbibi nke ha
Judaizes clam na Pita na -ezo aka ebe a maka ndị jụrụ ịgbaso Iwu ahụ n'ihi na ọ na -ekwu maka Pọl yana n'ihi na ọ na -ekwu maka njehie nke ndị na -emebi iwu. Ilele BDAG Lexicon maka okwu Grik athesmos (ἄθεσμος), Isi ihe pụtara bụ “ịbụ onye enweghị ụkpụrụ, enweghị isi, ihe ihere, onye na -emebi iwu. Ndị na -emebi iwu n'okwu a abụghịcha ndị na -adịghị eme Iwu Mozis kamakwa ndị na -enweghị ụkpụrụ na -ejikwa ihe odide Pọl dị ka ikike ibi n'ime mmehie.
Ihe na -ekwu na amaokwu 16, bụ na Pita kwuru na ọ bụ enweghi ike nke na -agbagọ ihe ndị dị otu a maka mbibi ha. Okwu Grik ebe a maka akwụghị chịm bụ astēriktos (). A na -eji okwu a naanị otu ebe ọzọ na Agba Ọhụrụ nke dịkwa n'akwụkwọ 2 Pita, yabụ ihe gbara ya gburugburu kwesịrị inye anyị ihe ngosi nke onye Pita na -ekwu maka ya bụ ndị na -agbagọ Pọl. 2 Pita 2:14 na -ekwu maka ndị na -arafu ndị na -adịghị akwụsi ike (astēriktos. N'otu akụkụ ahụ ọ gara n'ihu na -ekwu na ha "hụrụ uru nke ihe ọjọọ n'anya" (2Pet 2: 15) na, "ha na -arafu site na agụụ anụ ahụ nke anụ ahụ." (2Pet 2:18) N'amaokwu nke abụọ Pita, Pita na -ekwu maka ndị ji ihe odide Pọl dị ka ikike ịnabata mmehie gụnyere ịkwa iko na anyaukwu. Nke a metụtara ndị Kraịst na -ebi ndụ dịka nkuzi nke Kraịst, ma ha anọghị n'okpuru Iwu Mosis.
2 Peter 3: 15-17 abụghị ikike ịjụ ozizi Pọl. Pita asịghị na ha kwesịrị ileghara nkuzi Pọl anya, kama ọ na -emesi ha ike site n'ịsị, "Nwanne anyị nwoke anyị hụrụ n'anya Pọl dekwara gị akwụkwọ dịka amamihe enyere ya." (2 Pita 3:15). Pita anaghị emebi Pọl - ọ na -akwado ya. Anyị nwere ọtụtụ nkuzi doro anya n'aka Pọl maka nghọta ziri ezi gụnyere eziokwu na anyị anaghị eje ozi n'okpuru ụzọ ochie nke koodu edere kama ọ bụ ụzọ ọhụrụ nke mmụọ. (Ndị Rom 7: 6-7) Ndị mmadụ na-anọgide na-eme mmehie adịghị eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ dị ka Pọl kwuru, "Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ si dị, ị ga-anwụ, mana ọ bụrụ na ị na-egbu mmụọ. omume nke ahụ, ị ​​ga -adị ndụ. ” (Ndị Rom 8:13). Iwu nke Mmụọ nke ndụ emeela ka anyị nwere onwe anyị n'ime Kraịst Jizọs n'iwu nke mmehie na ọnwụ. (Ndị Rom 8: 2)
(2 Pita 3: 15-18) Enwere ihe ụfọdụ dị n'ime ha - nke ndị na -amaghị ihe na ndị na -ejighị n'aka na -agbagọ na mbibi nke ha
15 Werekwa ndidi Onyenwe anyị dị ka nzọpụta, dị nnọọ ka nwanne anyị nwoke anyị hụrụ n'anya bụ Pọl dekwara unu akwụkwọ dịka amamihe enyere ya, 16 dị ka ọ na -eme n'akwụkwọ ozi ya niile mgbe ọ na -ekwu n'ime ha gbasara ihe ndị a. Enwere ihe ụfọdụ n'ime ha siri ike nghọta, nke ndị na -amaghị na ndị na -akwụghị chịm (astēriktos) gbagọrọ agbagọ ka mbibi nke ha, dị ka ha na -eme Akwụkwọ Nsọ ndị ọzọ. 17 Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, ebe unu buru ụzọ mara nke a, lezienụ anya ka njehie nke ndị na -emebi iwu ghara iburu unu, wee tụfuo nkwụsi ike nke onwe unu..
(2 Pita 2: 14-20) Ha nwere anya juputara na ịkwa iko, afọ adịghị eju ha maka mmehie. Ha na -arafu mkpụrụ obi na -adịghị akwụsi ike.
14 Ha nwere anya juputara na ịkwa iko, afọ adịghị eju ha maka mmehie. Ha na -arafu ejighi ike (astēriktos) mkpụrụ obi. Ha nwere obi a zụrụ na anyaukwu. Ụmụ a bụrụ ọnụ! 15 Ha hapụrụ ụzọ ziri ezi, ha akpafuola. Ha esorola ụzọ Belam nwa Biọ. onye hụrụ uru nke ajọ omume n'anya, 16 ma a baara ya mba maka njehie ya; ịnyịnya ibu na -ekwu okwu ji olu mmadụ kwuo okwu wee gbochie ara onye amụma ahụ. 17 Ndị a bụ isi iyi na -enweghị mmiri na alụlụ nke oké ifufe na -ebugharị. Nye ha, e debere ọchịchịrị nke oké ọchịchịrị. 18 N'ihi na, n'ikwu okwu n'olu nganga nke nzuzu, ha na -arafu site na agụụ anụ arụ nke anụ arụ ndị na -agbapụ ọsọ ọsọ na ndị na -ebi na njehie. 19 Ha na -ekwe ha nkwa nnwere onwe, mana ha onwe ha bụ ohu nke ire ure. N'ihi na ihe ọ bụla nke na -emeri mmadụ, ọ bụ ohu. 20 N'ihi na ọ bụrụ na, mgbe ha gbanarịrị mmerụ nke ụwa site n'ọmụma nke Onye -nwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, etinyere ha ọzọ wee merie ha, ọnọdụ ikpeazụ ga -adịrị ha njọ karịa nke mbụ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịhụ otu amaokwu iji gosi na Pọl na -akwado iwu, nke a ga -abụ otu. Ha na -eme nke a site na iwere nke a dị ka amaokwu dịpụrụ adịpụ - enweghị isi na isi ihe Pọl na -ekwu. Anyi aghaghi ileba anya n'okwu gbara gburugburu iji ghọta nke ọma ihe okwu Pọl ebe a kwesịrị ka ewere dị ka ihe ọ pụtara. N'ụzọ doro anya, Pọl na -ezo aka 'n'iwu' n'echiche efu. N'ebe a, a na -eji "iwu" egosipụta ụkpụrụ nduzi nke ụkpụrụ omume karịa iwu Mozis n'ozuzu ya gụnyere iwu nke koodu edere ede. Ọ bụ naanị n'echiche a ka a ga -asị ndị na -enweghị iwu "site n'ọmụmụ na -eme ihe iwu chọrọ" (Ndị Rom 2:14). Ụkpụrụ iwu ndị a n'ozuzu ha bụ ihe Pọl na -ezo aka dị ka “iwu” - ọ bụghị iwu Levitikọt 613 nke Moses guzobere. Anyị nwere ike ịhụ na Ndị Rom 2: 8-9, Pọl na-eme ọdịiche n'etiti ndị na-achọ nzọpụta (otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ) na ndị na-achọ ọdịmma onwe ha ma na-erubereghị eziokwu isi, ma na-erube isi n'ajọ omume. Ọdịiche dị n'etiti ndị na -eme amaokwu ọma ndị na -eme ihe ọjọọ n'echeghị ịbụ onye Juu ma ọ bụ onye mba ọzọ. (Ndị Rom 2: 9-10) Pọl na-ekwu na Chineke anaghị ele mmadụ anya n'ihu. (Ndị Rom 2:11)
Olee otu Chineke nke na -anaghị ele mmadụ anya n'ihu si ekpe ndị na -enweghị iwu ikpe ziri ezi? Isi ihe Pọl na -ekwu bụ na ndị nwere okwukwe na -agbaso ụkpụrụ dị elu nke iwu n'agbanyeghị na ha anaghị eso iwu ruo n'akwụkwọ ozi. Ọ bụ n'ezie ndị mba ọzọ na -enweghị iwu nwere ike ime ihe iwu chọrọ. (Ndị Rom 2:14) Ha na -egosi na edere ọrụ iwu ahụ n'obi ha, ebe akọ na uche ha na -agbarakwa ama. (Ndị Rom 2:15) Pọl kwenyere na ọ bụrụ na onye na -ebighị úgwù na -edebe iwu nke iwu, a ga -ewere ibi úgwù ya dị ka ibi úgwù. (Ndị Rom 2:26) Na mmechi, Pọl kwenyere na onye Juu bụ n'ime, na ibi úgwù bụ nke obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi. (Ndị Rom 2:29) N'ezie, Ndị Rom 2:29 na -agbagha kpọmkwem ndị na -akọwahie Ndị Rom 2:13, dị ka Pọl na -akwado ịgbaso Iwu Mosis. Ihe Pọl na -emesi ike bụ na Mmụọ (ọ bụghị leta) gụnyere inwe ezi obi, na ịgbaso ụkpụrụ ndị ahụ dị elu nke iwu kwupụtara. (Ndị Rom 2:29)
Ndị Rom 2: 6-29 Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu
6 Ọ ga -akwụ onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị: 7 nye ndị na-eji ndidi na-eme nke ọma na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ọ ga-enye ndụ ebighi ebi; 8 ma nye ndị na-achọ ọdịmma onwe ha ma na-anaghị erube isi n'eziokwu, ma na-erube isi n'ajọ omume, iwe na ọnụma ga -adị. 9 A ga -enwe mkpagbu na ahụhụ maka mmadụ niile na -eme ihe ọjọọ, onye Juu mbụ na onye Grik, 10 ma otuto na nsọpụrụ na udo dịrị onye ọ bụla na -eme ihe ọma, onye Juu buru ụzọ mee ihe na onye Grik. 11 N'ihi na Chineke anaghị ele mmadụ anya n'ihu.
Ndị Rom 2: 12-16 Ndị mba ọzọ, ndị na -enweghị iwu, site n'ọmụmụ na -eme ihe iwu chọrọ
12 N'ihi na ndị niile mehiere na -enweghị iwu ga -alakwa n'iyi n'iwu, ndị niile mehiere n'okpuru iwu ga -ekpe ikpe site n'iwu. 13 N'ihi na ọ bụghị ndị na -anụ iwu bụ ndị ezi omume n'ihu Chineke, kama ndị na -eme iwu ga -abụ ndị ezi omume. 14 n'ihi na mgbe ndị mba ọzọ, ndị na -enweghị iwu, site n'ọmụmụ na -eme ihe iwu chọrọ, ha bụ iwu nye onwe ha, n'agbanyeghị na ha enweghị iwu.. 15 Ha na -egosi na edere ọrụ iwu ahụ n'obi ha, ebe akọ na uche ha na -agbakwa ama, echiche ha na -emegiderịta na -ebo ha ebubo ma ọ bụ ọbụna gbaghara ha 16 n'ụbọchị ahụ mgbe, dịka oziọma m si dị, Chineke ga -ekpe ikpe nzuzo nke mmadụ site na Kraịst Jizọs.
(Ndị Rom 2: 25-29) Ibi úgwù bụ nke obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi.
25 N'ihi na ibi ugwu bara uru n'ezie ma ọ bụrụ na ị na -erube isi n'iwu; 26 Ya mere, ọ bụrụ na onye na -ebighị úgwù na -edebe iwu nke iwu, ọ bụ na a gaghị ebuli ya ugwu dịka ibi ugwu? 27 Mgbe ahụ, onye a na -ebighị úgwù n'anụ ahụ mana na -edebe iwu ga -ama gị ikpe onye nwere koodu e dere ede na ibi úgwù mana mebie iwu. 28 N'ihi na ọ dịghị onye ọ bụla bụ onye Juu nke bụ naanị otu onye n'elu, ibi úgwù abụghịkwa n'elu ahụ na nke anụ ahụ. 29 Ma onye Juu bụ n'ime, na ibi úgwù bụ nke obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi. Otuto ya esiteghị na mmadụ mana o sitere na Chineke.
Judaizes rụtụrụ aka na Aịsaịa 56 dịka maka nzọpụta na-abịanụ nakwa na a ga-atụ anya ka emebere ụbọchị izu ike nke ndị Juu na ndị mba ọzọ (Aịsaịa 56: 2, 4, 6). Kedu ihe bụ eziokwu dịka akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na -ekwu maka ihe ga -eme n'ọdịnihu mgbe, “n'oge na -adịghị anya nzọpụta m ga -abịa, a ga -ekpughekwa ezi omume m.” (Aịsaịa 56: 2) N'ezie, ezi omume nke a gaje ikpughe bụ Ọgbakọ Nọn site na onye na -enye iwu ọhụrụ, Jizọs Kraịst. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ ga -enweta ezi omume ọhụrụ a site na Kraịst ma na -erube isi n'ozizi ya. N'iburu n'uche Aịsaịa na-ekwu maka ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ naghị ekwu maka iwu Mozis n'ihe banyere ụbọchị izu ike nke asaa ebe ọ bụ na ekpughere ụzọ ezi omume ahụ n'iwu. Ọ na -ekwu maka ụzọ ọhụrụ na ndụ nke idebe Ụbọchị Izu Ike site na Mmụọ Nsọ nke anyị nwere ike nweta site n'ọbara Jizọs.
Isi izugbe nke ụbọchị izu -ike bụ oge izu ike site n'ọrụ na ịrara nye Chineke. Ọ nwere ike dabere na ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ oge ezumike. Ọ bụ ezie na ndị na-eme dị ka iwu ochie na koodu dere siri chee na nke a bụ ụbọchị izu ike nke asaa, ọ nweghị ihe kpatara ị ga-eji gụọ ebe a na-atụ anya nzọpụta na ezi omume nke na-abịa. Ụbọchị izu ike dịka onye isi izugbe dị iche na itinye n'ọrụ idebe ụbọchị nsọ. Ọ bụ ezie na ndị na -ekpere arụsị anaghị edebe Ụbọchị Izu Ike dịka iwu Moses si dị, edere ya n'Akwụkwọ Nsọ ka ha debe ụbọchị izu ike. (Hos 2: 11-13) Chineke kpọrọ ụbọchị izu ike nke ndị ajọ mmadụ na-eme ihe ọjọọ asị (Aịsa 1: 13-17) N'agbanyeghị eziokwu na ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii na-eme ụbọchị izu ike nke ụbọchị nke asaa, Jizọs kpọrọ ha mmebi iwu maka inwe mpụta nke ịdị nsọ na mpụga mana adịghị ọcha n'ime. (Matiu 23: 27-28)
Ịghara imerụ ụbọchị izu ike bụ ịghara ileghara iwepụta oge maka ịrara onwe anyị nye Chineke yana maka ịgbasa ozi n'ihe Chineke - ọ bụghị na a ga -eme ya dịka iwu Mozis ma ọ bụ omenala ndị Juu siri dị. Na Aịsaịa, ihe a na -emesi ike bụ idobe ikpe ziri ezi, ime ezi omume, (Aịsa 56: 1) idobe aka n'aka ime ihe ọjọọ ọ bụla (Aịsa 56: 2), na ịhọrọ ihe na -atọ Chineke ụtọ (Isa 56: 4) Ihe a na -ekwu bụ idobe nsọpụrụ na ekpere nye Chineke. Jizọs bụ ihe atụ kachasị mma nke otu anyị kwesịrị isi chọta izu ike n'ime Chineke dịka ụzọ ọhụrụ nke mmụọ si dị, ọ bụghị ụzọ ochie nke koodu edere ede.
Ndị ụkọchukwu na -enye onyinye dịka iwu siri dị bụ ihe nomi na onyinyo nke ihe dị n'eluigwe. (Ndị Hibru 8: 4-5) Iwu ahụ nwere naanị onyinyo nke ihe ndị na-abịa kama ịbụ ezigbo ọdịdị nke ihe ndị a. (Ndị Hibru 10: 1) Ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ajụjụ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ maka ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike - ihe ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. . (Ndị Kọlọsi 2: 16-17)
Isaiah 56: 1-8 (ESV), n'oge na-adịghị anya nzọpụta m ga-abịa, a ga-ekpughekwa ezi omume m
1 Otú a ka Jehova siri:
"Debe ikpe ziri ezi, meekwa ezi omume,
n'ihi na nzọpụta m ga -abịa n'oge na -adịghị anya
ewe kpughe ezi omumem.
2 Ngọzi na -adịrị onye na -eme nke a,
na nwa nke mmadụ nke jidesiri ya ike,
Onye n keepsdebe ubọchi -izu -ike, ghara ime ka ọ ghara idi nsọ,
Ọ n keepsb keepsochi kwa aka -Ya ime ihe ọjọ ọ bula."
3 Ka onye ala ọzọ nke sonyeere Jehova ghara ikwu sị,
“Jehova ga -ekewapụ m n'etiti ndị ya”;
ka ọnaozi gharakwa ikwu,
“Lee, abụ m osisi kpọrọ nkụ.”
4 N'ihi na otú a ka Jehova siri:
"Nye ndị ọnaozi ndị na -edebe ụbọchị izu ike m,
ndi nāhọrọ ihe nke nātọm utọ
jidesie kwa ọgbụgba ndụ m ike,
5 M ga -enye n'ime ụlọ m na n'ime mgbidi m
ihe ncheta na aha
dị mma karịa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị;
M'g givenye kwa ha aha ebighi -ebi
nke agaghi -ebipu.
6 "Na ndị mba ọzọ na -esonyere Jehova,
ijere Ya ozi, ihu aha Jehova n'anya,
na ịbụ ndị na -ejere ya ozi,
onye ọ bụla na -edebe ụbọchị izu ike ma ghara ime ya ka ọ ghara ịdị nsọ,
Ọ n holdsjide kwa ọb myub mya -ndum-
7 ihe ndị a ka m ga -eweta n'ugwu nsọ m,
meekwa ka ha fulụrịa ọ houseụ n'ụlọ ekpere m;
àjà -nsure -ọku nile ha na àjà -ha
a ga -anabata ya n'elu ebe ịchụàjà m;
n'ihi na a ga -akpọ ụlọ m ụlọ ekpere
maka mmadụ niile. ”
8 Onye -nwe -ayi Jehova,
onye na -akpọkọta ndị Izrel a chụpụrụ achụpụ, ka ọ na -ekwu,
“M ga -akpọkọtakwa ndị ọzọ bịakwute ya
e wezụga ndị ahụ ezukọtaworo. ”
Aisaia 1: 13-17 (ESV), Ọnwa ọhụrụ na ụbọchị izu ike-enweghị m ike ịnagide ajọ omume na nzukọ ukwu
gbachitere ikpe nwanyị di ya nwụrụ.
Ndị Kọlọsi 2: 16-23 Ememe ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike - ndia bu onyinyo nke ihe gaje ibia
16 Ya mere, ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike.. 17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. 18 Ekwela ka onye ọ bụla mee ka ị ghara iru eru, na -ekwusi ike n'ịchụ akụnụba na ofufe ndị mmụọ ozi, na -aga n'ihu n'ụzọ zuru ezu banyere ọhụụ, na -enwe uche nke anụ ahụ fụliri elu n'enweghị ihe kpatara ya, 19 ma ghara ijidesi Isi ahụ ike, onye anụ ahụ niile na -azụ ma na -ejikọ ọnụ site na nkwonkwo ya na akwara ya, na -eto na uto nke sitere na Chineke.
20 Ọ bụrụ na gị na Kraịst nwụrụ nye mmụọ nke ụwa, gịnị kpatara, dị ka a ga -asị na ị ka dị ndụ n'ụwa, ị na -edo onwe gị n'okpuru ụkpụrụ- 21 "Ejila aka, Enetụla ire, emetụla aka" 22 (na -ekwu maka ihe niile na -ala n'iyi ka ejiri ya mee ihe) - dịka iwu na nkuzi mmadụ siri dị? 23 N'ezie ndị a nwere ngosi nke amamihe n'ịkwalite okpukpe mere onwe ha na ịchụnta ego na ịdị arọ n'ahụ, mana ha abaghị uru n'ịkwụsị imeju anụ ahụ.
Judaizes rụtụrụ aka na Aịsaịa 66:17 dị ka ihe na -egosi na iwu nri nke Agba Ochie Agba Ọhụrụ ka na -ekwu na anụ ezi ezinaụlọ nwere ihe arụ. Amaokwu a, na -ekwu maka ikpere arụsị. Arụtụ aka na “Ndị na -edo onwe ha nsọ ma na -eme onwe ha ka ha banye n'ubi a, na -eso otu n'ime ha” nwere ike bụrụ Osisi Ashera. Osisi ndị a ma ọ bụ osisi ndị a kpụrụ akpụ mgbe ụfọdụ, guzoro dị ka ihe ncheta dị nsọ na ụtụ nye chi nwanyị Kenean, Ashera. Ọ bụ ezie na iri anụ ezi na ụmụ oke na -ejikọta ya na ndị na -ekpere arụsị, iri ezi na oke (ihe a na -elebu anya dị ka ihe na -adịghị ọcha) abụghị isi ihe kpatara ndị a ga -eji kwụsị. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi n'ihi na ndị a bụ ndị na -efe arụsị ma na -eme ihe arụ. Edepụtara anụ ezi na ụmụ oke ka edepụtara "ihe arụ". Nke a na -egosi ihe ọ bụla “ihe arụ” ọ dị njọ karịa iri anụ ezi na oke ebe ọ bụ na akpọghị anụ ezi "ihe arụ."
Ekwela ka onye ọ bụla maa gị ikpe n'ajụjụ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ. (Ndị Kọlọsi 2:16) Ọ bụrụ na gị na Kraịst nwụrụ ịnwụ anwụ nke ụwa, gịnị kpatara, dị ka a ga -asị na ị ka dị ndụ n'ụwa, na -edo onwe gị n'okpuru iwu - “Ejila aka, edetụla ire, emetụla aka. ” (Ndị Kọlọsi 2: 20-21) Kpachara anya maka ndị chọrọ izere nri Chineke kere ka ndị kwere ma mara eziokwu wee jiri ekele nabata ya -N'ihi na ihe niile Chineke kere dị mma, ọ nweghịkwa ihe a ga -ajụ ma ọ bụrụ natara ekele, n'ihi na e doro ya nsọ site n'okwu Chineke na ekpere. (1 Tim 4: 1-5) Mgbe Jizọs kwupụtara, “ihe ọ bụla nke si n'ime mmadụ bata n'ime ya enweghị ike imerụ ya, ebe ọ bụ na ọ banyeghị n'obi ya mana afọ ya, wee chụpụ ya," o kwupụtara na nri niile dị ọcha. (Mak 15-19) Ọ sịrị, “Ihe na-apụta n'ime mmadụ bụ ihe na-emerụ ya-n'ihi na n'ime, n'ime obi mmadụ, echiche ọjọọ na-apụta, ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, ịkwa iko, anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ. , agụụ mmekọahụ, anyaụfụ, nkwutọ, mpako, nzuzu. ” (Mak 7: 21-22) Ihe ọjọọ ndị a niile na-esi n'ime pụta, ha na-emerụkwa mmadụ. (Mak 7:23)
Aisaia 66: 17, Ndị na -edo onwe ha nsọ ma na -edo onwe ha nsọ ịbanye n'ubi, na -eso otu n'ime
17 “Ndị na -edo onwe ha nsọ ma na -edo onwe ha nsọ ka ha banye n'ubi a, na -eso otu n'ime ha, na -eri anụ ezi na ihe arụ na oke, ga -agwụcha ọnụ, ka Jehova kwuru.
Ndị Kọlọsi 2: 16-23 Ya mere ekwela ka onye ọ bụla maa gị ikpe n'ajụjụ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ
(1 Timoti 4: 1-5) Ihe niile Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga-ajụ ma ọ bụrụ na ejiri ekele were ya.
1 Ugbu a Mmụọ na -ekwu hoo haa na n'oge ikpeazụ, ụfọdụ ga -apụ n'okwukwe site na itinye onwe ha na mmụọ aghụghọ na nkuzi nke ndị mmụọ ọjọọ, 2 site n'emeghị ihe n'eziokwu nke ndị ụgha, ndị akọ na uche ha kpuchiri, 3 ndị na -egbochi alụmdi na nwunye na chọrọ izere nri ndị Chineke kere ka ndị kwere ma mara eziokwu wee nata ekele. 4 N'ihi na ihe niile Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga -ajụ ma ọ bụrụ na ejiri ekele na -anabata ya, 5 n'ihi na edoro ya nsọ site n'okwu Chineke na ekpere.
Mark 7: 14-23 (ESV), Ọ dịghị ihe dị na mpụga mmadụ nke ịbanye n'ime ya nwere ike merụọ ya
14 O we kpọ ndi Israel ọzọ biakute ya, si ha, Nurunum, unu nile, ghọta -kwa -nu: 15 Ọ dịghị ihe dị na mpụga mmadụ nke ịbanye n'ime ya nwere ike merụọ ya, mana ihe na -esi n'ime mmadụ apụta na -emerụ ya. " 17 Ma mgbe ọ banyere n'ime ụlọ ma hapụ ndị mmadụ, ndị na -eso ụzọ ya jụrụ ya gbasara ilu ahụ. 18 O we si ha, Thennu onwe -unu kwa, ùnu enweghi nghọta? Ị hụghị na ihe ọ bụla si n'ime mmadụ bata n'ime mmadụ enweghị ike imerụ ya, 19 ebe ọ bụ na ọ banyeghị n'obi ya mana afọ ya, wee chụpụ ya? " (Ya mere, o kwupụtara na nri niile dị ọcha.) 20 Ọ sịkwara, “Ihe si n'ime mmadụ pụta bụ ihe na -emerụ ya. 21 N'ihi na n'ime, n'obi mmadụ, ka echiche ọjọọ si apụta, ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, ịkwa iko, 22 anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ, agụụ mmekọahụ, anyaụfụ, nkwutọ, mpako, nzuzu. 23 Ihe ọjọọ ndị a niile na -esi n’ime apụta, na -emerụ mmadụ. ”
Zekaraịa 14: 16-19 na-ekwu maka ụbọchị na-abịa nke Onyenwe anyị. Nke a bụ mgbe oge mkpagbu gasịrị ma gbasara ndị lanarịrị mba niile wakporo Jerusalem. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na -ekwu maka ọbụbụ ọnụ ụnwụ nri na ihe otiti nye ndị na -agaghị agbago na Jerusalem ime mmemme ụlọ ntu (mmemme ụlọikwuu). Ememme a, nke a na -eme na ngwụcha oge owuwe ihe ubi, gụnyere ibi n'ụlọ ezumike nwa ụbọchị asaa. N'Iwu Mozis, ụmụ Izrel niile ga -ebi n'ụlọ ntu, ka ọgbọ ha wee mara na Chineke mere ka ụmụ Izrel biri n'ụlọ ntu mgbe ọ kpọpụtara ha n'ala Ijipt. (Lev 23: 42-43) Dị ka Zekaraịa 14 si kwuo, ọ bụ naanị na Jeruselem ka a ga-eme ya nke ọma. Ọtụtụ ndị na-akwado ịgbaso mmemme na ụbọchị, gụnyere mmemme ụlọ ntu (Sukkot) anaghị aga Jerusalem ịga mee mmemme ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'amụma Zekaraịa 14: 15-19.
N'ọnọdụ amụma ahụ, ọ dị ka ntaramahụhụ maka mba ndị ahụ bụbu ndị iro Izrel, ka ha wee mata Chineke nke Israel. Ihe a chọrọ abụghị ihe zuru ụwa ọnụ, ọ naghị emetụta oge dị ugbu a, n'agbanyeghị na ọ dị ka ọ ga -adị mgbe mkpagbu gachara n'ime alaeze puku afọ iri nke Kraịst. Ọ bụ ezie na a ga -ehiwe mmemme pụrụ iche ma debe ya n'ọdịniihu, nke a apụtaghị na oriri a na -emetụta ụwa niile n'oge a. Mgbe Jizọs ga -amalite ịchị, ndị nọ n'alaeze ya ga -enwe obi ụtọ isonye na omenala na emume ọ bụla ọ hiwere. Mgbe Jizọs ga -alọta, ọ ga -achị dị ka eze na -achị mba niile, ndị mmadụ ga -erubere ya isi dịka iwu siri dị.
Dị ka ndị kwere n'Oziọma ahụ, anyị kwenyere na a na -akpọ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe ma e wezụga ọrụ nke iwu. (Ndị Rom 3:28). Anyị maara na a naghị agụ mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama ọ bụ site na okwukwe na Jizọs Kraịst, yabụ na anyị kwekwara na Kraịst Jizọs, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site na okwukwe na Kraịst ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị onye a ga -agụ n'onye ezi omume. (Gal 2: 16) N'ime Kraịst anyị na -akwatu ụzọ ochie ebe anyị nwụrụ n'iwu, ka anyị wee dịrị ndụ nye Chineke site n'okwukwe n'Ọkpara Chineke, onye hụrụ anyị n'anya ma nye onwe ya maka anyị. (Ndị Galeshia 2: 18-20) Ndị niile na -adabere n'ọrụ iwu dị n'okpuru ọbụbụ ọnụ. (Ndị Galeshia 3:10). Onye ezi -omume ga -adị ndụ site n’okwukwe na iwu abụghị nke okwukwe. (Gal 3: 11-12) N'ime Kraịst Jizọs ngọzi Abraham abịara ndị mba ọzọ, ka anyị wee nata okwukwe ekwere na nkwa. (Gal 3:14) Ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ajụjụ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ maka ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike - Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. . (Ndị Kọlọsi 2: 16-17)
Zekaraya 14: 16-19 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ)
16 Mgbe ahụ onye ọ bụla nke dị ndụ site na mba niile ndị ahụ wakporo Jerusalem ga -agbago kwa afọ iji fee Eze, Jehova nke ụsụụ ndị agha, na ime mmemme ụlọ ntu. 17 Ọ bụrụkwa na ezinụlọ ọ bụla nke ụwa agbagoteghị Jerusalem ife Eze, bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha, mmiri agaghị ezo na ha. 18 Ma ọ bụrụ na ezinụlọ Ijipt agbagoteghị onwe ha, mmiri agaghị ezokwasị ha; ọ gābu ihe -otiti nke Jehova ji eti mba nile ndi nādighi -arigo ime ememe ulo -ntu. 19 a ga -abụ ntaramahụhụ a ga -enye Egypt na ntaramahụhụ a ga -enye mba niile ndị na -agaghị agbago ime ememme ụlọ ndò.
Ndị Rom 3: 28 (ESV), a na -esite n'okwukwe kpọọ mmadụ n'onye ezi omume ma ọ bụghị n'ọrụ nke iwu
28 n'ihi na ayi siri na an issite n'onye ezi omume site n'okwukwe ma -ọbughi ọlu iwu.
(Ndị Galetia 2: 16-21) Anyị kwere na Kraịst Jizọs, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe n'ime Kraịst, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu
15 Anyị onwe anyị bụ ndị Juu site n'ọmụmụ, anyị abụghị ndị mmehie nke ndị Jentaịl; 16 ma anyị maara na ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu ka a na -akpọ mmadụ n'onye ezi omume kama site na okwukwe na Jizọs Kraịst, yabụ anyị onwe anyị ekwerewokwa na Jizọs Kraịst, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe na Kraịst ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị onye a ga -agụ n'onye ezi omume. 17 Ma ọ bụrụ na, n'ime mbọ anyị na -agba ka anyị bụrụ ndị ezi omume n'ime Kraịst, a hụkwara anyị onwe anyị dị ka ndị mmehie, mgbe ahụ Kraịst ọ bụ ohu mmehie? Ọ dịghị ma ọlị! 18 N'ihi na ọ bụrụ na m na -ewughachi ihe m kwadara, ana m egosi na m bụ onye na -emebi iwu. 19 N'ihi na ọ bụ site n'iwu ka m nwụrụ nye iwu, ka m wee dị ndụ nye Chineke. 20 A kpọgidere m na Kraịst n'obe. Ọ bụghịzi m dị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst nke bi n'ime m. Na ndụ m na -ebi ugbu a n'anụ ahụ m na -ebi site na okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m. 21 Anaghị m emebi amara Chineke, n'ihi na ọ buru na ezi omume sitere n'iwu, ya mere Kraist nwuru n'efu.
Ndị Galetia 3: 10-14 (Iwu) esiteghị n'okwukwe
10 n'ihi na ndị niile na -adabere n'ọrụ iwu dị n'okpuru ọbụbụ ọnụ; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye anābu ọnu ka ọ bu, bú onye nādighi -erube isi n'ihe nile edeworo n'akwukwọ iwu, me ha. 11 Ugbu a ọ pụtara ìhè na ọ dịghị onye ọ bụla a na -agụ n'onye ezi omume n'ihu Chineke, n'ihi na "Onye ezi omume ga -adị ndụ site n'okwukwe." 12 Mana iwu esiteghị n'okwukwe, kama "Onye na -eme ha ga -esi na ya dị ndụ." 13 Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ anyị ọbụbụ ọnụ- n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụwara n'elu osisi bụ" 14 ka ọ were nime Kraist Jisus ngọzi Abraham nwere ike ịbịakwute ndị mba ọzọ, ka anyị wee site n'okwukwe nata mmụọ ekwere na nkwa.
Ndị Kọlọsi 2: 16-17 (ESV), Lọ dịghịkwa onye ga -ekpe gị ikpe maka mmemme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike
16 Ya mere, ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike.. 17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst.